परिवार नै मिलेर बिहानको समयमा योग, ध्यानको अभ्यास गरौं । तर, कहिल्यै योग वा ध्यान नगरेकाले कसरी गर्ने ? यहाँ केही उपाय सुझाइएको छ । – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/परिवार नै मिलेर बिहानको समयमा योग, ध्यानको अभ्यास गरौं । तर, कहिल्यै योग वा ध्यान नगरेकाले कसरी गर्ने ? यहाँ केही उपाय सुझाइएको छ ।